Imilenze yesofa yesinyithi, imilenze yetafile yesinyithi, isakhelo setafile- iGeLan
Imilenze yeTafile yentsimbi
Imilenze yeTafile eguqukayo
Izixhobo zeGeLan zibonelela ngamakhulu emilenze yefanitshala yesinyithi. Malunga ne-60% yimilenze yokulala, iipesenti ezingama-30 yimilenze yetafile, kwaye iipesenti ezili-10 zizakhelo zeetafile. Iindidi ezahlukeneyo zesofa / zetafile ezinokukhethwa kwimilenze ziyafumaneka kuwe, ezinje nge-hairpin, unxantathu kunye ne-tapered. Unokukhetha kwakhona kwitafile, isofa, kunye nekhabhathi. Kananjalo nakwisinyithi, intsimbi engenasici, kunye nemilenze yesofa yesinyithi ingasetyenziselwa ekhaya, eofisini okanye kwigumbi lokuhlala.
Imilenze etafileni emnyama intsimbi yentsimbi yentsimbi ...
I-hairpin Legs V yentsimbi yokutyela i-coffee din ...
Isofa Imilenze iindawo zefanitshala emnyama ngeenxa zonke zekofu ca ...
imilenze ifanitshala yesinyithi
Imilenze yefenitshala yentsimbi ibonelela ngokukhethwa kwesitayile kwifenitshala yanamhlanje, okanye ukubonelela ngemvakalelo yanamhlanje yeesofa nezitulo zemveli. Imilo eyahlukeneyo imele iindlela ezahlukeneyo, kubandakanya imilenze ethambileyo, imilenze ejikelezileyo, kunye nemilenze yeenwele. Le milenze yefanitshala ekumgangatho ophezulu ifanelekile kakhulu kwisofa, iitafile zokutyela, iikhabhathi, iitafile zekofu kunye nenye ifanitshala. Yenziwe ngentsimbi okanye ngentsimbi. Yenza ubungakanani obahlukeneyo ukuze ulingane nefenitshala yakho. Uthotho lobungakanani bokukhetha lubonelelwe ukuqinisekisa ukuba imilenze yefanitshala inokufakwa kuyo yonke ifanitshala.
imilenze yesofa yentsimbi
Inkampani yethu ngumvelisi oqeqeshiweyo ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ophakathi kunye nomgangatho ophezulu ngobuchule bobuchwephesha, ikhredithi ebalaseleyo kwiminyaka engama-22.
IGeLan Industrial Co, Ltd.yinkampani eneminyaka engama-20 yamava kwimveliso yefanitshala yezixhobo. Ime kwiXia'nan Zone yoShishino, kwiDolophu yaseYuanzhou, kwiNgingqi yaseBoluo, kwisiXeko saseHuizhou. Isondele kwizixeko ezithathu ezikhulu-iHuizhou, iDongguan kunye nephondo laseShenzhen. Le zokuhamba Kulula kakhulu. Okwangoku, sinama-6000 eemitha zesikwere sezakhiwo zefektri. Iimveliso eziphambili zezi imilenze yesofa(imilenze yosofa) kunye imilenze yetafile, isakhelo setafileIinyawo zekhabhinethi, iinyawo zebhedi, iziqwenga zokudibanisa, iisofa zentloko kunye nezinye izixhobo zefanitshala, kwaye wamkelekile ukwenza ngokwezifiso zonke iintlobo zeemveliso zekhompyutha. Uthungelwano lweemarike lugubungela iYurophu, iUnited States, iJapan kunye namashishini awaziwayo asekhaya.
Ukukhangela iinyawo zefanitshala zesinyithi ezinoqoqosho, ezizinzileyo nezomeleleyo? Jonga iinyawo ezilungileyo zefanitshala zesinyithi kwiGELAN. Sineentlobo ezahlukeneyo zeenyawo, ezinjengefanitshala yesofa imilenze, imilenze yetafile, iitafile zekofu okanye izitendi zetafile! IGELAN ngumnikezeli ngeenyawo wefanitshala, ukuthenga iinyawo zefanitshala kunenzuzo yexabiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho. I-GELAN ineentlobo ngeentlobo zeentsimbi zefanitshala ezinokukhetha kuzo, kubandakanya imilenze ye-hairpin, ukusonga imilenze kunye nemilenze ehlengahlengiswayo. Unokukhetha izitayile ezahlukeneyo kunye neentlobo zemilenze yetheyibhile yekofu, imilenze yetheyibhile kunye nemilenze yetafile yesofa, ukuze kube lula ukuyenza ifanitshala kwaye ujonge kanye le nto uyifunayo. Itafile yensimbi (isofa) yemilenze yomelele kwaye iyahlala, ibonelela ngenkxaso eninzi. Imilenze yeTafile yensimbi ikhangeleka intle phantsi kweetafile zekofu, iidesika kunye neebhentshi.
Umzi-mveliso ngqo China RV Stepless Height Adjus ...
Ukuqhubeka nokuphucula inkqubo yolawulo ...
Abathengisi abaphezulu baseTshayina abaNtsimbi abaHlengiweyo beF ...
Sigcina ukuphucula nokuphucula urhwebo lwethu ...
Metal Isakhelo For Coffee Table Round Marble Table ...
Ngentsingiselo Metal Isakhelo Itafile Round Marble Tabl ...
Itheyibhile yesakhelo sale mihla Round Metal Isakhelo Tea C ...
Factory Custom-ezenziwe Metal esofa Foot ...
Steel Table Imilenze Stainless Umsebenzi Rectangul ...
Abenzi Chinese Custom Custom Work R ...
Isakhelo setafile yesinyithi ifanitshala yasekhaya ejikeleze ikofu ...
ifanitshala yasekhaya itafile yekofu emarmore ephezulu iya ...
Imilenze yetafile yangoku enkulu yeV-Shaped Furnitu ...
Large Modern V-Waxonxa Furniture Itheyibhile Umlenze Suppo ...
I-Iron Metal eyenziwe ngeFenitshala yeeFenitshala zeMilenze ...
Imilenze yeSofa yeSofa yesiqhelo, Imilenze yeTafile, Imilenze yefanitshala.
Kutheni le nto Imilenze Imilenze Imilenze yefanitshala ...
Athini amanyathelo okhuseleko xa ufaka iM ...
Ngaba uyazi naziphi na iindlela zokudibanisa ikofu ...
Uyintoni umahluko phakathi kokuphakama ...
Uyilungisa njani iMilenze yeTafile yeKofu | G ...
Xia'nan Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, kwiphondo Guangdong
Sitsalele ngoku: +86 13480550448